यातायात व्यवसायीलाई लाग्यो ठुलो झट्का सरकारको पक्षमा उद्योग वाणिज्य महासंघले चाल्यो यस्तो कदम, एक्लिए सिन्डिकेटधारी ! || सुनौलो नेपाल
यातायात व्यवसायीलाई लाग्यो ठुलो झट्का सरकारको पक्षमा उद्योग वाणिज्य महासंघले चाल्यो यस्तो कदम, एक्लिए सिन्डिकेटधारी !
सरकारको निर्णयको स्वागत
६ चैत, काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ । बिहीवार प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दे महासंघले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयलाई समर्थन गर्दै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।